निर्वाचन सर्ने हल्ला : सर्वोच्चले रोक्ला त वैशाख ३० को चुनाव ?
शुक्रबार, असार १०, २०७९
म लहरा होइन शिखरमा उभिएको वृक्ष हुँ भन्ने ठान्नु पर्छ : लेखक कुन्ता शर्मा (भिडियो )
फिदिम नगरपालिकाले ९८ करोडको बजेट ल्यायो
५ देखि ११ बर्षका बालबालिकालाई आजदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप, प्रदेश १ मा ४ जिल्ला मात्र ? (सुची सहित )
खेल मैदान लथालिङ् हुँदा खेलकुद गतिविधि ठप्प
वाह! गज्जब दाह्री
चारजना महिला एसएसपी डीआईजी बढुवामा सिफारिस
नौ वर्षीया बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार, ७६ वर्षीय वृद्ध पक्राउ
गुनगुनाहट तमोरको (फोटो फिचर )
बिर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षसहित १० जना व्यवसायी प्रहरी नियन्त्रणमा
१. दुबईका राजकुमारले दिए दुर्गा प्रसाईंलाई सुनको लौरो उपहार
२. जिल्ला भलिवल संघ पाँचथरमा २३ वर्ष पछि नेतृत्व परिर्वतन
३. जिसस इलामको प्रमुखमा एमालेका राई र उपप्रमुखमा एसका बराइली विजयी
४. फिदिममा दुषित पानीका कारण बढ्दै संक्रमण
५. चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको एसईई नतिजा यो वर्ष दुई महिनामै
६. ताप्लेजुङकाे पहिरोले ५३ परिवार विस्थापित
७. प्रदेश १ को नाममा दुई शब्द नजोडिने, ‘किराँत’ आउट
८. विदेशको कमाइले श्रीमतिको नाममा जग्गा पास, श्रीमति अर्कै पुरुषसँग टाप !
९. झापा कारागार तास र रक्सीको अखडा बनेको खुलासा : मुक्ति दिन कैदीबन्दीको माग
१०. नातिनीलाई यौन धन्दामा लगाउने हजुर आमासहित दुई पक्राउ
शुक्रबार, चैत २५, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं ।सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले समेत आफ्नो तयारी तीब्र पारेका छन् । निर्वाचनको तयारीकै बीचमा अहिलेसम्म निर्वाचन सर्ने हल्ला चल्न छाडेको छैन । दलहरुले सारेनन् भने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय निर्वाचन रोकिने तर्कसमेत सुन्न थालिएको छ ।
यतिबेला मुख्यतः नेकपा एमालेका केही नेताहरु सत्तारुढ दलबाट ‘अदालतलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनको मिति सार्ने षडयन्त्र’ भइरहेको बताउँछन् । तल्लो तहका राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा कायमै छ ।के कुनै राजनीतिक दल, सत्ता गठबन्धन वा समूहले चाहँदैमा अब सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर बैशाख ३० को निर्वाचनको मिति सर्न सम्भव छ ? सत्तारुढ दलका नेताहरुले कुनै हालतमा चुनाव नसर्ने बताइरहेका छन् । तर, आशंका गर्नेहरुले सर्वोच्च अदालतले चुनाव रोकिदिन सक्ने आशंका गर्न छाडेका छैनन् ।
सिंगै देशको ध्यान बैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दालाई देखाएर कतिपयले अदालतबाटै चुनाव स्थगन हुन सक्ने आशंका गरेका हुन् ।नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले गत फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त रिट निवेदन गत फागुन ११ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परी विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । यद्यपि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचनको कार्यक्रम नियमितरुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।मेयर साहले पेश गरेको सो मुद्दाको पेसी त्यसपछि तोकिएको छैन । उक्त मुद्दाको पेसी नतोकिए पनि साधारण तारेखका लागि साहलाई वैशाख २ गतेको म्याद दिइएको छ । अदालतले सरकार वा आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै यतिबेला विभिन्न निकायबाट कागजात मगाउने काम भइरहेको अदालत स्रोत बताउँछ ।
यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले पनि दर्ता गराएका थिए । फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा पनि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । उक्त आदेशमा सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।
दुबै रिटमाथिको छलफलका लागि चैत २८ गतेका लागि डाकिएको छ । उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको पालो कुर्न सम्भवतः जेठ महिना कुनुपर्ने हुनसक्छ, जतिबेला चुनावै भइसक्छ
मेयर सञ्जिवकुमार साहको मुद्दामा वैशाख २ गतेसम्म अङ्ग पुगेको अवस्थामा त्यसपछि बल्ल पेसी तारेख दिन सकिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रातोपाटीलाई बताए । सो मुद्दामा वैशाख २ गते अगाडि केही नहुने उनले बताए ।
यी दुवै मुद्दा एकै प्रकृतिका भएकाले दुवै मुद्दालाई लगाउमा राखेर हेर्ने आदेश भएमा लगाउमा जनिन पनि सक्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले कारण देखाउ आदेश र छलफलमा बोलाउँदैमा निर्वाचनको कार्यक्रम रोकिने सम्भावना कम रहेको स्रोत बताउँछ ।
मेयर साहले दायर गरेको मुद्दामा अझै अङ्ग नपुगेको कारण जनाउँदै अर्को पेसी दिइएको छैन । चौरसियाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।चैत २८ गते सो मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुनुवाई हुने अवस्था नभएमा अर्को पालो आउन समय लाग्नेछ । यदि वैशाख ३० अगाडि नै मुद्दाको किनारा नलागेमा औचित्य समाप्त भई रिट खारेज हुनेछ । यद्यपि रिट खारेज गर्दै गर्दा पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने अदालतले दिन सक्नेछ ।
अहिले निर्वाचन हुँदैन वा निर्वाचनको मिति सर्छ भन्ने आशंका यही दुईवटा रिटलाई लिएर भइरहेको छ । सत्तारुढ दलहरु तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई अदालतमै रहेको मुद्दाका कारण निर्वाचनको मिति सर्ने हो कि भन्ने लागेको छ ।
अदालतमा सेटिङ गरेर सत्तारुढ दलले निर्वाचनको मिति सार्न खोजेको एमालेका केही नेताहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । अर्कोतिर एमालेले नै चुनावको मिति सार्न चाहिरहेको सत्ता पक्षका नेताहरुको अर्को आरोप छ ।
नेकपा फुटाउने त्यो ‘सेटिङ’
अदालतमा सेटिङ हुन सक्ने हल्ला नेकपा फुटाउने सन्दर्भमा पनि चलेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा अदालतले नेकपा नै फुटाइदिएको थियो ।पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउँदै संसद पुनस्र्थापना गराएको थियो ।
संसद पुनःस्थापनापछि नेकपाभित्र स्पष्टरुपमा दुई समूह देखिएको थियो, केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह । पार्टीभित्र आफूहरु अल्पमतमा पर्न थालेपछि त्यतिबेला ओली पक्षका नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरु ‘फिल्म अझै बाँकी छ’ भन्दै ऋषि कट्टेलको मुद्दाले नेकपाको छिनोफानो गर्ने बताएका थिए ।
आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधाएर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टीले नाम राखेको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । करिब दुई वर्ष त्यसै थन्किएको कट्टेलको रिट एकाएक पेसीमा चढ्न थालेको थियो । र, २०७७ फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने गरी एकता नै खारेज गरिदिएको थियो ।
पहिलेको नामसँग जुधेको भन्दै सर्वोच्चले नाम परिवर्तन गर्न आदेश दिनुको साटो एकता नै खारेज हुने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टीका रुपमा कायम रहेका थिए । उक्त आदेशपछि एमालेभित्र केपी शर्मा ओली बलियो बनेपछि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमाले नै फुटाएका थिए ।
दुबईका राजकुमारले दिए दुर्गा प्रसाईंलाई सुनको लौरो उपहार
जिसस इलामको प्रमुखमा एमालेका राई र उपप्रमुखमा एसका बराइली विजयी
चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको एसईई नतिजा यो वर्ष दुई महिनामै